घरजम गर्ने मु*डमा नायिका ऋचा शर्मा - Ramechhap Online
मुख्य पृष्ठ /मनोरंजन/घरजम गर्ने मु*डमा नायिका ऋचा शर्मा
घरजम गर्ने मु*डमा नायिका ऋचा शर्मा
काठमाडौं । नायिका ऋर्चा शर्माले यसै वर्ष विवाह गर्ने संकेत गरेकी छिन् । केही समययता राणा परिवारका युवासँगको प्रेममा रहेको बताइएकी ऋर्चाले यसअघि एक अन्तर्वार्ताको क्रममा २०७६ सालमा विवाह गर्ने याेजनामा रहेकाे बताएकी थिइन् ।
ऋचाकाे समकालीन साथी प्रियंका कार्की पनि यसै वर्ष बैवाहिक बन्धनमा बाँधिदैछिन् । ऋर्चाले पनि विवाह गर्ने निर्णय लिएकी छिन् । फिल्ममा अभिनय गरेकी ऋर्चा पछिल्लो समय विभिन्न रियालिटी शोहरुमा निर्णायकको भूमिकामा समेत देखिने गरेकी छिन् । गतवर्ष ऋर्चाले हरर फिल्म ‘सुनकेसरी’ निर्माण गरेकी थिइन् । उनलाई यो फिल्मले सोचे जति सन्तुष्टि दिएन । अब उनले हरर फिल्म खेल्ने इच्छा समेत नभएको बताएकी छिन् ।
फिल्म निर्माण तिर नदेखिएकी ऋर्चाले यही वर्ष ‘पाङग्रा एक्सपेस्र’ मार्फत व्यवसाय तिर हात हालिन्। अब भने उनी घरजम गर्ने मुडमा पुगेकी हुन् ।
नङ विभिन्न स्वास्थ्य कारणले फुल्ने गर्छ । नङमा सेतो दाग देखिनु विज्ञानको भाषामा ल्युकोनाकिया भएको वा म्युरेक्स लाइन भनिने गरिन्छ । नङको तल्लो भागमा चोट लागेमा वा नङ थिचिएमा नङमा सेतो दाग देखिन थाल्छ ।
पकाएको भात थालमै बल जसरी उफ्रियो, चामल प्लास्टिकको हुनसक्ने आशंका
जागिर खाने हो ? उड्डयन प्राधिकरणले माग्यो ठूलो संख्यामा कर्मचारी ! यसरी भर्नुस् फारम [सूचना]
सावधान हुनुस है, मेहन्दी लगाउँदा क्यान्सरसम्म हुन सक्छ जानकारीको लागि सक्दो शेयर गर्नुहोला आफु पनि बचौँ अरूलाई पनि बचाउ
विप्लव समूहको पाेलिटब्यूराे भंग, १७ जनालाई कारवाही